साताकाे पहिलाे दिन आइतबार बढ्यो सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ – Sapana Sanjal
July 4, 2021 158
Sapana Sanjal : साताकाे पहिलाे दिन आइतबार बढ्यो सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ । आज आइतबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मुल्य बढेको छ । आज छापावाला सुन तोलामा २ सय रुपैयाँ बढेकाे नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
आज छापावाला सुन ताेलामा २ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुन पनि तोलामा २ सय रुपैयाँ बढेर प्रतितोला ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
यता चाँदी मूल्य पनि आज तोलामा १५ रुपैयाँ बढेको छ । आज चाँदी प्रतितोला १ हजार ३ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । **थप जानकारीका लागि तल क्लिक गर्नुहाेस्**
Prevऔषधिको पछाडि हुने गरेकाे रातो धर्काको अर्थ धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ, थाहा नहुदाँ खतरनाक बन्नसक्छ !
Nextआमाको लास सडक छेउमा राखेर रुदै गरेका टुहुरा बच्चाहरु !! यदि तिमीमा प्रेम छ भने फोटो छुनुहोस् र R.I.P. लेख्नुहोस् !!